သင်၏ချောကလက်များကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောချောကလက်အိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုးရန်အကြံဥာဏ်များ။ ချောကလက်ဖြူသေတ္တာ၏အမည်အရချောကလက်များကိုထုပ်ပိုးရန်ပြသသည်။ ချောကလက်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုချိုမြိန်တယ်။ လူတွေကအဲဒါကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အမှတ်အသားအဖြစ်ရှုမြင်ကြတယ်။ အခြားသူများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ချောကလက်များသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတကယ်ပြသသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဘဝဖြစ်သည်။ လူများသည်သူတို့၏ပျော်ရွှင်မှု၊ ခံစားချက်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမျှဝေကြသည် […]
BREAKTHROUGH & PURSUE EXCELLENCE
Brother Packaging (HK) Limited isaprofessional tin can supplier which provides extensive services and solutions to the packaging and promotional market. These cover the supply on tin products for dry food packaging, such as biscuits, chocolate, coffee, tea, candy, etc, as well as gifts and premium items for various types ofapromotional campaign. In addition to the tin box, we are also able to extend our product lines and services under the cooperation with our alliance to paper can and paper tube packaging which can provide another packaging option to clients.
Metal Sheet ဖြတ်တောက်ခြင်း
သေးငယ်သည့်သတ္တုပြားကိုစက်ပေါ်တွင်ပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သံဖြူထုတ်လုပ်သည့်အဓိကနှင့်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသေးငယ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များစွာအဖြစ်ခွဲထားသည်။
အပြီးသတ်သောသံဖြူသေတ္တာကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရက်ဖြင့်ဆေးကြောပြီးပုံးထဲမ ၀ င်မီမီးဖိုမှတစ်ဆင့်ကူးစက်သွားလိမ့်မည်။
The quality of products produced at the same price is not much different, but the service gap is large. Tin Packaging is very patient to provide services to each customer and meet customer requirements. I am very satisfied and look forward to working with him next time.
His gift tin box packaging looks beautiful and smooth, which not only expands the sense of space, but also makes the gift tin box packaging design more intuitive, simpler, more characteristic, and very popular among the public.
Whatabeautiful box! I am very satisfied with these tin boxes. Super beautiful. Very suitable for decorating small items for my goods.